कसरी मुद्रकमा स्क्यान गर्न - उपयोगी सुझावहरू
कसरी मुद्रकमा स्क्यान गर्न? आज, यो पनि एक बच्चा सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। एक तथाकथित MFP - यो लामो मुद्रक, एक बहु-समारोह उपकरणमा संयुक्त स्क्यानर र कापियर छ। तिनीहरूले मात्र डिजाइन छैन फरक, तर पनि गति, काम को गुणवत्ता, र अन्य गुणहरू।
compactness गर्नुपर्छ उपकरण जस्तै को चयन र सीमित बजेट मा पहिलो स्थानमा छ भने, यो सबै भन्दा सरल मिसिन विचार गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। एक विकल्प जस्तै एउटा उदाहरण Epson लेखनी CX 4100. एक मोडेल कसरी ब्रान्ड को एक मुद्रकमा स्क्यान गर्न हुनेछ?
यो एकाइ रंग स्क्यानर सीसीडी-सेन्सर, अप्टिकल संकल्प को आकार को आधार मा सेट गरिएको छ - 1200h2400dpi। म यो वर्ग को उपकरण लागि एकदम सभ्य संकल्प छ भनेर भन्न पर्छ।
यो स्क्यानर मा, त्यहाँ सञ्चालनको तीन मोड हो:
• सरल - सेटिङ भाग स्वयं गरिन आवश्यक;
• स्वत - प्रकार र कागजातको स्रोत, अनुकूलन पूर्वावलोकनमा र स्क्यान स्वतः गरिन्छ को संकल्प;
• व्यावसायिक मोड - प्रयोगकर्ता सबै सेटिङ आफैलाई पूरा गर्न सक्षम छ।
स्वचालित वा मार्गदर्शन स्क्यानिङ लागि चालक र सफ्टवेयर संग एक सीडी, पीडीएफ-ढाँचामा बचत, फोटो र यति मा रंग पुनर्स्थापना उपकरण समावेश छ।
, कम्प्युटर गर्न स्क्यानर-मुद्रक जडान उपकरण चालक स्थापना, र तपाईं काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी मुद्रक लेखनी CX 4100 देखि स्क्यान गर्न? यो धेरै सरल छ। यसलाई डेस्कटपमा चाहेको कागजातमा ठाँउ, «EPSON स्मार्ट प्यानल» आवेदन खुला, यो प्रतिमा «स्क्यान» फेला पार्न र जानकारी पढेर प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अर्को, संकेतहरुको पालन गर्नुहोस्।
कसरी गर्न स्क्यान गर्न मुद्रक, सैमसंग को SCX 4100
यो multifunction उपकरणों को अर्को प्रतिनिधि हो। यो प्रयोग गरेर उपकरण चालक संग स्थापित छ, «सैमसंग SmarThru 4" - त्यहाँ पनि स्क्यानर प्रयोग को लागि एक विशेष आवेदन छ अप्टिकल डिस्क।
मुद्रक को आवरण खोल्न, त्यहाँ राख्न कागजात वा फोटो (यस मामला मा पुस्तिका चिह्न द्वारा निर्देशित हुनुपर्छ)। अब चलाउन सक्नुहुन्छ «सैमसंग SmarThru4स्क्यान" ", यो प्रतिमा पाउनुहुनेछ" र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं स्क्यानिङ लागि सेटिङ चयन गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ अर्को विन्डो तपाईं अगाडि देखा पर्नेछ। विभिन्न मोड मा एक मुद्रकमा स्क्यान गर्न?
तपाईं ट्याब "अनुप्रयोग" प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, स्क्यान कागजात आफ्नो कम्प्युटरमा कार्यक्रम मध्ये पास गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईं "ई-मेल" ट्याब लागू भने, स्क्यान गरे र त्यसपछि तोकिएको इमेल ठेगानामा एउटा कागजात वा फोटो पठाउन गरिनेछ। आफ्नो कम्प्युटरमा स्क्यान परिणाम सुरक्षित मदत गर्न "फोल्डर" हेर्नुहोस्। र तपाईं पाठ पहिचान गर्न आवश्यक छ भने, ट्याब प्रयोग "अंकित पत्ता लगाउने।"
इच्छित मोड, सबै अनुमति र कलरम्याटिसिटि मान सेट चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि "स्क्यान" मा क्लिक गर्नुहोस् र प्रक्रिया सुरु।
«सैमसंग SmarThru 4" अनुप्रयोग प्रयोग बिना मुद्रकमा कसरी स्क्यान गर्न
यो गर्न, इन्टरफेस «त्वं» सामान्यतया पूर्वनिर्धारित अपरेटिङ सिस्टम मा स्थापित छ जो प्रयोग गर्नुहोस्। प्रक्रिया सुरु गर्न, तपाईं सम्पादन वा खोल्न आवश्यक OCR, को खोलियो कागजातको स्रोत रूपमा "« सैमसंग SCX 4100 र चयन गर्नुहोस्।
सबै Multifunctional उपकरणहरू को सञ्चालनको सिद्धान्त यस्तै छ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा: बस चालक स्थापना र कम्प्युटरमा मुद्रक जडान, र त्यसपछि चुपचाप काम गर्न सुरु गर्नुहोस्।
Windows7प्रोसेसर तापमान
जब तपाईं सक्रिय आफ्नो कम्प्युटर beeps भने
Eizo निगरानी: सबै भन्दा राम्रो मोडेल र समीक्षा एक सिंहावलोकन
आफ्नो हात संग बयलर बांधन
मान्छे केन्द्रीय रूस मा माछा पकडने। रूसी शिल्प
प्रेम आफ्नो जीवन परिवर्तन हुनेछ भन्ने पुष्टि
औषध "Avodart" र "Omnic": संयुक्त आवेदन, वर्णन र समीक्षा। अनुकूलता "Omnicom" र "Avodart": Urology को सिफारिसहरू
रंग अन्धो - यो के हो? रंग अन्धो लागि परीक्षण। चालक अनुमतिपत्र, र रंग अन्धो
आधारभूत विधि र सिद्धान्तहरू: वयस्क मा strabismus को उपचार
Celery Puree Soup, Salmon or Asparagus
3D-मोडेल को रचना: को कार्यक्रम को एक समीक्षा, को विवरण
क्लच छ ... सानो महिला हैंडबैग